Akụkọ - Meokon 1 nkeji “Nyochaa”: Ọrụ nnyefe Bluetooth nke ọnụ ụzọ ikuku
Meokon 1 nkeji “Nyochaa”: Bluetooth nnyefe ọrụ nke wireless ọnụ ụzọ ámá
Site na mmepe nke Internet nke Ihe na nnukwu data teknụzụ, yana ntinye ngwa ngwa nke ụlọ ndị nwere ọgụgụ isi na obodo ndị mara mma, nyocha teknụzụ na mmepe na ntinye ngwaahịa nke ọnụ ụzọ ikuku na-aga n'ihu. N'ebe a, ozugbo ọnụ ụzọ ikuku Bluetooth pụta, ọ natara nlebara anya na ụlọ ọrụ ahụ.
Ọnụ ụzọ ámá ahụ na-eji nnyefe Bluetooth na-enweghị eriri, nke a na-etolitekarị site na iji RT-Thread (agbakwunyere ezigbo oge multi-threading operating system), nke nwere uru ndị doro anya, gụnyere ọtụtụ atụmatụ dịka ụzọ nkwukọrịta dị iche iche, ọnụ ụzọ nnweta dị ukwuu, na nrụgide na ọnọdụ okpomọkụ. nnweta.
Mgbe ejikọrọ ọnụ ụzọ ámá wireless nwere njikọ na otu mpaghara mpaghara ahụ, ọ nwere ike ịbanye na ibe weebụ nhazi na ọnụ ụzọ Bluetooth site na kọmputa iji jikwaa ihe mmetụta ahụ. Nwere ike ịgbakwunye / hichapụ agbụ Bluetooth na-agagharị ma hazie ihe mmetụta sensọ. Tụkwasị na nke ahụ, usoro ntinye nke usoro a nke ọnụ ụzọ ámá Bluetooth adịghị mfe dị mfe ma dị mma, ma nwee ihe nkwụnye ọkụ 220V, nke dị mfe maka ntinye na saịtị na mmezi nke ndị injinia.
Ọnụ ụzọ ikuku Bluetooth nwere uru ndị a:
1. Ihe a na-emeziwanye, ma teknụzụ a na-ahụ anya na ọdịdị nke ọdịdị dị ka ihe kwekọrọ na mkpa nke ngwa ngwa ahụ, olu dị obere, ọkwa njikọta dị elu, yana etinyere ngwa ahụ nke ọma.
2. Ọnụ ụzọ Bluetooth nwere ike ịkwado ọtụtụ ụzọ nkwukọrịta dị ka Ethernet / 4G / RS485 iji gboo mkpa dị iche iche n'okpuru ọnọdụ nkwukọrịta dị iche iche;
3. Ọnụ ụzọ ámá ahụ nwere ike ịkwado ịnweta ihe karịrị ihe mmetụta 100 Bluetooth na ihe karịrị 100 parameters, ma na-akwado njikwa ọnụ ụzọ ámá na nhazi nke ihe mmetụta sensọ, nke gosipụtara miri emi uru nke ngwaahịa ahụ dị ukwuu na "ikuku Bluetooth wireless";
4. Enwere ike ijikọ ya na ụdị sensọ dị iche iche dịka nrụgide, ọnọdụ okpomọkụ, ọkwa mmiri, ọnọdụ okpomọkụ na iru mmiri, ma nwee ike tinye ya na ọnọdụ dị iche iche.
Site na nkwado nke ọtụtụ uru na njirimara, ọnụ ụzọ ikuku Bluetooth nwere ọtụtụ ngwa ma nwee ike itinye ya n'ọrụ ndapụta ngwa ngwa dịka ụlọ mgbapụta ọkụ, ụlọ ọrụ ama ama, ụlọ nyocha, na ụlọ kọmputa. Enwere ike ịhụ na atụmanya ahịa ọdịnihu nke ọnụ ụzọ ámá ahụ doro anya, ma enwere ike ịgbatị ngwa ngwa.